Man United, Liverpool, Chelsea Iyo Lixda Kooxood Ee Waaweyn Oo Dalbaday In La Sameeyo Horyaal Cusub Oo Ay Ku Jiraan Rangers & Celtic - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMan United, Liverpool, Chelsea Iyo Lixda Kooxood Ee Waaweyn Oo Dalbaday In La Sameeyo Horyaal Cusub Oo Ay Ku Jiraan Rangers & Celtic
April 22, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Kooxaha waaweyn ee horyaalka waddanka Ingiriiska Premier League ayaa markii uu kasoo fashilmay Super League, waxay la yimaaddeen qorshe kale oo gudaha waddanka UK lagaga samaynayo tartan cusub oo loogu magac daray ‘British Super League’, kaas oo ay doonayaan in ay kasoo qayb-galaan labada kooxood ee reer Scotland ee Rangers iyo Celtic.
Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham iyo Manchester City ayaa soo jeediyey in la sameeyo tartan ay ku kulmaan kooxaha waaweyn ee reer Britain, isla markaana ay hormood u yihiin lixdoodan kooxood iyo labada naadi ee Rangers iyo Celtic oo ka mid ah kooxaha ugu magaca weyn ee UK.
Super League oo ay kooxahani hormood ka ahaayeen, ayna ku qasbnaadeen in ay ka baxaan kaddib dhalleecayn ba’an oo kaga timid FIFA, UEFA iyo dawladda UK, ayaa waxay hadda doonayaan in gudaha UK ay ka bilaabaan isla hawshii oo kale oo markan ay faa’iido dhaqaale oo badan ka helayaan dhamaan kooxaha dalkooda.
Ciyaarta cadaawadda badan ee xamaasaddeeda dunida oo dhan laga dareemo ee Old Firm ayaa iyadoo heerkeedu ka duwan yahay sidii hore ay jamaahiirtu u heli doonaan nasiib, haddii uu hirgalo qorshaha cusub.
Celitc iyo Rangers ayaa heli doona fursad ay qayb kaga noqdaan jarista keegga Premier League iyo in ay xafiiltan la galaan kooxo aanay inta badan nasiib isku helin.
Qorshan cusub ayaa la rumaysan yahay in ay taageereyaashu aad u xiisaynayaan, sidoo kalena shirkadaha xayaysiiska iyo telefishannada ciyaaruhuba ay ku dagaallami doonaan sidii ay maalgelintiisa iyo baahintiisana qayb uga noqon lahaayeen.
Waxa jira warar kale oo sheegaya in Celtic iyo Rangers la doonayo in ay usoo wareegaan horyaalka Premier League oo ka heersarreeya midka Scotland, taas oo iyagana fursad u siinaysa in ay si toos ah uga qyab-geli karaan Champions League.